Home AFRIKA CARUURTA FOOTBALL Ciyaartoyda Kubadda Cagta ee Nigeria Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee Legend Footballers oo ugu fiican ee loo yaqaan naaneyska; "Pastor". Dabeecadeena Taribo West Childhood Story iyo Warqadaha Aan Waadi Karin Waxyaabaha kuugu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la taaban karo waqtiyada carruurnimada ilaa taariikhda. Waxay ku saabsan tahay sheekada gangska ka hor inta magaceeda, nolosha qoyska, sheekada riwaayadaha, sida uu u noqday wadaad iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo aan la ogeyn isaga.
Haa, qof kastaa wuu xusuustaa isaga oo timaha midabka leh iyo taakuleenta. Si kastaba ha ahaatee, taageerayaal yar oo kaliya ayaa wax badan ka ogaanaya Taribo West Bio kaas oo aad u xiiso badan. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Hore
Taribo West wuxuu ku dhashay maalinta 26th ee March 1974 ee Port Harcourt, Nigeria. Sida dhallinyaro badan oo Nigerian ah ayaa u guuri doona Lagos sidii dhalinyaro ah, sidaas oo kale waxay u ahayd West. Markii uu ku soo noqday magaalada Lagos, West wuxuu isku dayay in uu qabsado shaqooyin isdaba joog ah oo ku yaal degmada Shomolu, oo ah khatar aad u ba'an, kaas oo galbeedku isbarbardhigaya Bronx, New York City. In uu erayada ...
'Qolada maxalliga ah waxaa loo yaqaan' Area Boys '. Waxaad la joogtay iyaga ama iyaga ka soo horjeeda, waxaanan u maleeyay in ay ka fiicnaan laheyd inay saaxiibo u noqoto marka loo eego cadawga. Burburinta, dagaalka, daroogada iyo boobka ayaa ahaa amarkii maalintii. Waxaan si aan caadi aheyn dadka ugu dhaadhicin karnaa wadada. '
Galbeed halka uu ku noolyahay Lagos uu ku soo rogay dakhliga ka soo baxa denbiyada maadaama uu ahaa caajis. Wuxuu sidoo kale xoojiyay sumcadiisa isagoo ciyaaraya kubada cagta. Ka dibna ... Maalin, isaga iyo saaxiibkiisii ​​ugu fiicnaa ee ku soo laabtay waddooyinka iyaga oo bacda lacag la xaday, waxay la socdeen xubin gole kooxeed, oo dalbaday lacag caddaan ah. Ka dib markii ay la dagaallamaan burcadda isku dhafan. Galbeedka saaxiibkiisa ayaa diiday inuu bixiyo bacda lacagta. Waxa uu ku dhuftay lafdhabar iyo dilka oo ku diley dariiqa saaxiibkiis oo reer galbeed ah oo aan awoodin inuu caawiyo.
Taribo West waxay la carartay lacagtii oo ay hooyadeed ku soo noqotay magaalada Port Harcourt. Kadib markuu arko dhinaca foolxumada gangsterism, waxa uu go'aansaday inuu u jeedo tamar buuxda kubadda cagta.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Kacsanaanta Fikradda
At Port Harcourt, West ayaa ku bilaabatay Obanta United. Ka dib markii ay farxad galisay taageerayaasha tartamada maxaliga ah galbeedka waxaa la ogaaday in Isniinta Sinclair ay u aragtay inuu u ciyaari karo naadiga kubadda cagta. Waxa uu sii waday inuu si xirfad leh ugula ciyaaro Obanta United ee 1989, ka hor inta uusan ku laabanin Naadiga 1990. Laga soo bilaabo Sharks, wuxuu u socday inuu u ciyaaro Enugu Rangers oo ku yaal 1991, ka hor inta uusan ku biirin Julius Berger 1992 sida lagu arkay muuqaalka hoose.
Kadib tijaabooyin guuleysi ah horaantii 1993, West waxay ku biirtay kooxda Faransiiska Auxerre oo uu hogaamiyo Guy Roux. Saddex sano kadib, wuxuu noqday xubin ka mid ah ciyaartoyda Olympic ee ku guuleystay billadda dahabka ee ciyaaraha Olombiga 1996. Galbeed ayaa ciyaaray daqiiqad kasta oo tartanka ah. Gacaliyeheeda dhalaalaya wuxuu noqday mid calaamad u ah difaac la'aanta. Waxay ahayd timo aad ka arki karto dhinaca kale ee garoonka.
Maaddaama uu timihiisu ku fiicnaadeen, sidaasi oo kale ayaa xadhigga adag iyo barnstorming uu kor u kacay gaar ahaan markii uu u ciyaaray dalkiisii ​​hooyo.
Inaan ku guuleysto ciyaaraha Olimbikada Inter Milan ayaa ku hogaaminaya adeegiisa. Markii uu Inter joogay, wuu ciyaaray Diego Simeone yaqaan Cholo iyo Ronaldo Luís Nazário de Lima.
Galbeed ayaa noqday ciyaaryahankii ku guuleystay koobka UEFA Cup markii uu hogaaminayay Nerazzurri si uu u guuleysto koobkan oo uu sheeganayay in uu soo maray dhaqdhaqaaqyo uu ku sameeyay dhaqaatiirta saaxibka ah ee Nigeria.
Ka dib guushii Talyaaniga, West ayaa go'aansatay inay xilli ciyaareed ku qaataan Derby County, iyagoo ka caawiyay inay ku sii hayaan Premier League, ka dibna Kaiserslautern ee Germany. Taribo waxa uu lahaa xirfad isaga aduunka oo dhan ku leh, xitaa Iran, iyada oo dhowr meelood oo Europe ah ay ku socdaan wadada. Inta kale, sida ay yiraahdaan, hadda waa taariikh.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Nolosha Xiriirka
Ka dib ciyaaryahan kasta oo Nigerian ah oo ka mid ah Olombikada 1996, waxaa jiray haweeney weyn ama saaxiibtiis, ama sida hadalku u socdo. Dhinaca Taribo West, waxaa jiray saaxiibkii bangiga ah ee bangiga adoo magaca-Adenuke oo mar dambe u beddelay xaaskiisa.
Munaasabada xaflada arooska waxay ahayd mid aan la garanaynin mid ka mid ah kuwa ugu caansan xilliga la qabtay. Qorshaha iyo liiska martida ayaa ka soocday munaasabadda xafladaha xafladaha kale ee lagu qabto isla mudadaas. Si kastaba ha noqotee, seddex isbuuc ka dib markii ay xidhxidhaan naas-nuujinta, lamaanayaashu way kala go'deen. Waxay dhacday ka dib markii eedeymaha iyo eedeymaha ka dhanka ah gaalnimada.
Seddex wiig oo guurka ah, warbaahintu waxay ku fashilantay sheegashadii Atinuke ee Taribo ee xishoodka ah si ay u dayacdo waajibaadkiisa guurka iyada oo aan ku koobnayn battari xaaskiisa. Taribo, dhanka kale, ayaa ku tilmaamay guurka sida sham, oo ay kufsadeen shaki, nacayb iyo jacayl. Wuxuu sidoo kale ku eedeeyay Atinuke in gaalnimada iyo nidar gelinta nidarrada guurka. Tani waxay timid waqtigii Atinuke markii la dhehay ayaa la sheegay in ay la jirtey bangiyo caan ah markii ay ka shaqaynaysay bangiga caanka ah markii uu joogay Nigeria.
Farqiga u dhexeeya labada qariib ee qariibka ah ayaa noqday mid aan loo dulqaadan karin, waxayna labaduba u socdeen maxkamad si loogu furo taas oo keentay furitaan. In kasta oo Taribo lagu soo warramay in uu shaqadiisii ​​xoola-dhaqatada ah ku qaadanayo heerkii xigay ee Talyaaniga, Atinuke ayaa u dhaqaaqay xiriir kale.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Isticmaal suugaanta iyo Babalawos
Galbeed ayaa mar kale qirtay inuu shumaca gubayo iyo dhagxaan dhagax ah oo uu ka helay Witch Dhakhaatiir ka hor ciyaaraha. Wuxuu intaa sii raaciyay in ciyaartoyda iyo tababareyaasha badanaaba aysan laheyn ficil ahaan isticmaalka dhakhaatiirta saxda ah. Markii ay weydiisay Tana Ayejina, wariye isboorti oo u dhashay wargeyska Nigerian Punch haddii uu ku lug lahaa ficil ahaan markii uu ahaa ciyaaryahan kubadda cagta, wuxuu si toos ah ugu jawaabay HAA!. In uu erayada ...
"Dabcan haa, ma garanayo sababta ay dadku u diidaan inay ka hadlaan ku lug lahaanshahooda jilicsanaanta. Cayaartooyinku waa inay sameeyaan awood badan. Marka ay jiraan dhacdooyin waaweyn, waxaad eegtaa garoonka, waxaad arkeysaa dadka, taageerayaasha oo ku boorinaya dhamaan noocyada kala duwan; magacyada ma jiraan, voodooists ma jiraan. Maalmihii aan ciyaarayay, markii aan jaahil ahayn, waxan u isticmaali jiray qaar mallamyada iyo babalawos (takhaatiirta dhaqameedka) si ay nooga dhigaan qurxiyo, taas oo aan ku qaadnay (xarun qaran). Mararka qaarkood way shaqeysay, mararka qaarkoodna ma aysan sameyn.
Kooxaha qaarkood, kahor ciyaar kasta, madaxweynaha ama hogaamiyaha kooxda ayaa ku siin doona nasiib nasiib leh si uu ula ciyaaro. Waxay kuu sheegi doonaan inaad ku ridato kabahaaga ama sharaabaadyadaada iyo ciyaarista. Waa caqiidadooda diineed; in ay ka caawin karto iyaga inay ku guuleystaan ​​kulamo.
Waxaa jira tababarayaal ka mid ah kuwa ku xiran saaxibbada Afrika iyo kuwa ka soo jeeda Senegal, Burkina Faso, Zaire ama xitaa Nigeria. Dadkani waxaa lagala tashanayaa inay bixiyaan natiijooyinkooda ciyaaraha xitaa kahor intaan ciyaaraha la ciyaarin. Dadkani waxay arkaan waxyaabo qariib ah, waxayna kuu sheegi karaan jilitaankooda iyo jilitaankooda, waxa natiijada ciyaarta noqon doonto. Dadku waxay aaminsan yihiin oo isticmaalaan. Waxay u shaqaysaa kuwa rumeeysan. Waan arkay, waan soo maray, waxaan la jiray ciyaartoydii isticmaalay, anigana waan isticmaalay. Haddaba, maxay tahay sababta dadku u diidaan? Ciyaaraha kubadda cagta iyo kubadda cagta. Wali way jirtaa. "
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Sidee ayuu u beddelay
Markii walaashii galbeed magaceeda loo yaqaan Patience oo ahaa wacdiye, ayaa booqasho rasmi ah ku tagay gurigiisa cusub ee Milan. Sida ay West ku dhejiso;
'Albaabka waan furay, ka hor inta aanan fursad u helin inaan ku dhaho waan ku faraxsanahay inaan arko iyada,' ayay tidhi: 'Waa inaad adigu awood u leedahay inaad ku noolaato guri sidaas oo kale ah.' Waxay ii sheegtay in guriga uu lahaa aura xun, waxaan waydiiyay nooca rasmiga ah ee aan sameeyay. Taribo West ayaa ka careysiisay hadalka iyada oo uu yiri ... "Haddii ayan wali wali wali wali wali wali wicin ayaan ku garaaci lahaa."
Sida ciyaartoy badan oo kubadda cagta ah, wuxuu ahaa mid aad u qiimo badan. Walaashiis oo ah haweeney ilaahay ah ayaa sidoo kale u sheegtay in ay dareemi karto dareemo firfircooni ah, waxayna tiri in ay arkayso laba eey - mid cad iyo mid madow - isaga oo gurigiisa ku dagaallamaya. Tani waxay aheyd markii kubadsameeyaha Taribo uu intaas raaciyay. Hadalkiisana si fudud ayay u qaadatay oo waxay si deg deg ah u sheegtey in uu lahaa tababarka. Bukaanku wuxuu ku guulaystay inuu sii joogo illaa uu walaalkeed ka soo noqdo tababarka. Waxay bilaabay inay Ilaah u tukato si ay u beddesho walaalkeed.
Markii West West ka soo laabtay tababarka, walaashiisna waxay lahayd warar badan. Inkastoo uu maqan yahay, waxay la seexatay oo runtii ahayd mid daahirsan, oo u sheegtay Taribo West in Ilaah isaga uga yeedhay jidkiisa xun ee noloshooda ku tilmaamaya waxa ay ku riyoonaysay isaga iyo uga digtoonow cawaaqibkiisa shuqulladiisa.
'Markaas ayaan ogaaday in aan u baahanahay caawimaad Ilaah,'. Dareenka galbeedka West wuxuu ka dhigtay qirasho. Wuxuu la tashaday walaashiis, labadaba waxay bilaabeen salaadda. Markay tukadeen, jiidhayaalkii guriga oo dhan ayaa bilaabay inay furaan oo xiraan ruux ahaan. Taribo mar uu soo laabtay ...
'Waxaan u maleynayay inay noqon doonto dabayl kaliya, laakiin sida fikirkaas ayaa galay madaxayga, albaabbada oo dhan waxay bilaabeen inay kufinayaan sidoo kale. Waxay u egtahay wax ka yimid filim xun, laakiin waan ogaa in ay dhab noqotay. Waxaan dareemay dareen diiran oo gudaha ah. " Tani waxay ahayd markii walaashii u jeestay oo wuxuu ku yidhi: "Taribo, Rabbigu wuxuu ku yidhi waxaad noqon doontaa wadaad".
Tani waxay ahayd markii uu naanaysta helay 'Pastor' sida uu u sheegay qof walba in uu u sheego isaga. Walaashiis wuxuu siiyay wixi ka mid ah wacdiye ku salaysan London, Pastor Ayo Don-Dawodu, oo khudbaddeedii xaqiijisay Galbeed rumaysadkiisii ​​oo wuxuu ku qanciyay inuu dhiso Hoyga Diyaarinta Duufaanta ee Affori, oo ah xaafada waqooyiga ee Milan.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Xoola-dhaqatada Soo-koobidda
Tan iyo markii uu is-bedelay walaashiisa, daaficii hore ee xulka Nigeria ayaa si dhakhso ah u bilaabay inuu ka horyimaado Ibliiska oo uu ku guuleysto inuu dib ugu soo celiyo Ciise talyaaniga.
Waqti dheer ma qaadanin ka hor inta uusan Taribo West u dhaqaaqin Lagos Nigeria si uu u dhiso laybereerigiisa Milan Hoyga Guriga Mucaawinada Stormriyadu dhamaantiis qaranka. Isku day inaad sida ugu suurta galsan tahay, ma qiyaasi kartid Mario Balotelli ka dib wadada isku midka ah ee Ghana.
Xitaa sanado kadib markii uu ka fariistay ciyaaraha kubadda cagta, Taribo ayaa sii waday taageerayaashiisa isagoo soo qabanqaabiyay weeraro xoogan oo ku saabsan Ajegunle, magaalada Nigerian ee ugu caansan oo uu ujeedkiisu ahaa inuu u bedelo gangstars oo hadda ku noolaa noloshiisii ​​hore. Taribo wuxuu awooday inuu kor u qaado $ 2million si uu u maalgeliyo xarun joogto ah oo loogu talagalay kuwa ku yaalla waddooyinka Ajegunle.
Qof kastaa wuu ogyahay inuu aad u deeqsiiyey oo si cad u qeexay dadka. Inta badan, halkii ay ka abuuri lahaayeen xayeysiisyo loogu talagalay xagjirnimada, Taribo ayaa u furan si ay u wacdiyaan sida lagu arkay sawirada hoose.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Maalmaha ugu dambeeya ee xanuunsan
Bishii Janaayo 2007, West ayaa ku dhoweyd inay la saxiixato kooxda Croatia Rijeka, lakiin waxa uu ku guuldareystay inuu daawadiisa qaato. Ugu dambeyntii wuxuu u wareegay Iran waxaana uu heshiis hal sano ah la galay shirkadda Paykan bishii August 2007. West West ayaa ku guuldareysatay inay ku bilaabato kooxda, iyadoo qandaraaskiisa uu joojiyay ogolaanshaha wadajir ah seddex bilood ka dib. Bishii Febraayo 2008, West ayaa lagu soo waramayaa inay sheegtay inay ku biiri doonto Segunda División Club Xerez, laakiin madaxweynaha kooxda ayaa diidey wax walba oo uu ku yimid imaanshihiisa.
Ka dib hawlgab, West ayaa sheegay in ...'Waxaan aadi doonaa Milan oo waxaan noqon doonaa wadaad xirfad leh \_ " ayuu yidhi. 'Ma jirto qaab aan noqon karo tababaraha. Tani waa dhamaadka kubadda cagta ee aniga ' Wuxuu ku qosli karaa fikraddaas.
Taribo West Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka looyaqaano -Dhexdhexaadnimada Da'da
2010, waxaa lagu soo waramey in West iyo xulafada kale ee Nigerian, sida Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu iyo Obafemi Martins, waxay ahaayeen ugu yaraan toddobo sano ka weyn intii ay sheegteen. Bishii Abriil 2013, Žarko Zečević, xog-hayaha guud ee Partizan, ayaa sheegay in galbeedka uu yahay 12 sano ka weyn da'da uu sheeganayo. Wax yar ka dib, West ayaa beenisay eedeymaha.
Zarko Zecevic ayaa u sheegay wargeyska Serbian Vecernje Novosti: "[West] ayaa nagu soo biirtay oo sheegaya in uu ahaa 28. Markii dambe ayaan ogaanay inuu ahaa 40, lakiin weli wuu fiicnaan lahaa, sidaasi darteed kama qoomameynayo inaan ku sii joogo kooxda. "
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta Taribo West Childhood Story iyo xaqiiqooyinka aan la sheegin. At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Nigerian Taariikhda Kubadda Cagta